Ukudla ekhaya: zokupheka zepikinikini
Esihlokweni sethu esithi "Yidla zokupheka ekhaya ukudla okulula kwepikinikini", sizokutshela ukuthi ungaphika ekhaya nasemvelweni ukupheka okuhle kwepikinikini. Spring, ehlobo - lesi yisikhathi lapho ngifuna ukuphuma emzini onothuli nomsindo phezu kwemvelo noma indlu yezwe. Ukuphefumula umoya omusha, ukuhlala othandekayo, abantu abaseduze. Futhi njengoba kunokwenzeka ukuhlanganisa okumnandi okuwusizo, kungenzeka ukuba ube nesidlo esihlwabusayo esimweni, emva kwakho konke esimweni nesifiso esihle. Kuhle ukuhlala negag webhiya noma ingilazi yewayini enkampanini enhle. Yini ongayipheka ku-grill e-cottage noma ngaphandle kwepikinikini?
Ungakwazi ukuxazulula le nkinga ngendlela elandelayo, ungakwazi ukupheka zonke izindlu uphinde uthathe nawe epikinikini, noma into ephekwe emvelo, into engavamile nokuhlwabusayo. Sithemba ukuthi uzothanda lezi zitsha.
Ukuze izitsha ukuthi sizopheka ku-grill, zazinomsoco futhi zinandi, udinga ukwazi amancane amancane:
- Ngaphambi kokwakheka kwemikhiqizo kwi-grill yonke imikhiqizo, udinga ukugcoba ngamafutha omnqumo.
- Yonke imikhiqizo phambi kwe-brazier kufanele iguqulwe noma igxilwe.
- Ungakwazi ukupheka ukudla kusengaphambili, ukuze ungahlushwa izivakashi ngokulindela nokugcina isikhathi.
Izinkumbi zengulube nemifino
Imfihlo ye-grill enhle yukuthi inyama kufanele ibe yikhwalithi bese ishisa kuqala. Ebusuku bokuhamba kohlobo lwemvelo, ungafaka izimbambo kuhhavini kusengaphambili. Ama-mangals awapheka ngomlilo kuphela, kodwa lokhu baye benza konke ukuphila kwabo. Ngeke sengozini impilo yezivakashi futhi sipheke zonke izindlu.
Izithako: U- anyanisi u-1, ama-clove ama-garlic angu-5, amaqabunga amabili weqabunga, 300 ml wewayini elibomvu elomile. I-cumin encane, i-kilogram yezingulube zezinkukhu, usawoti ukunambitha. Izingcezu ezimbili zepelepele, okungcono umbala ohlukile, ucezu olulodwa lwe-zucchini, ucezu olulodwa lwe-fennel, 50 ml wamafutha omnqumo.
Ukuze uthole le sauce, thatha amagremu angama-400 utamatisi ngo juice yakho, 2 wezipuni of utamatisi unamathela, 50 amagremu uju. Omunye uce anyanisi, uhhafu isanqante, amagremu angu-100 wesitshalo se-celery, amasentimitha angu-2 we-ginger root, 50 ml we-soy sauce, pepper nosawoti ukunambitha.
Beka izimbambo zegobe emgqeni, engeza u-anyanisi uthathe izingxenye ezine, u-garlic, i-cumin, iwayini, amaqabunga. Sengeza amanzi ukuze ihlanganise emaphethelweni ngo-2/3. Vala i-tray foil bese uyibeka emaminithini angu-45 kuhhavini ngokubhaka, ekushiseni kwama-degrees angu-180.
Lungisa i-sauce. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-ginger root, izaqathe ezinqamule ezincane, noma ezichotshoziwe kwi-blender, bese zifakwe ngamafutha omnqumo. Engeza unamathisela utamatisi, gcoba utamatisi ku-blender ngejusi lakhe bese ufaka ku-unamathisela utamatisi, ulethe ngamathumba uphinde upheke imizuzu emihlanu. Bese wengeza pepper, usawoti, soy sauce, uju bese upheka elinye imizuzu engu-10.
I-Fennel, i-zucchini, i-pepper yaseBulgaria iyinquma enkulu, igxwe emafutheni omnqumo futhi gazinga kuze kube yilapho i-crust ikhiwa ku-grill. Sizokhipha izimbambo ezivela emgodini, zipholile, sizinqume zibe yizicucu, ngezimbambo ezingu-3 noma ezine, futhi gazinga kuze kube sekulungeni ku-grill. Ama-Ribs angafakwa nge-sauce ephekiwe.
Sizokhonza izimbambo nge-sauce nemifino.
Shish kebab kusuka inkukhu
Izithako: amagremu angama-600 ensizeni ye-inkukhu, ucezu olulodwa lwe-bell pepper, izingcezu ezimbili ze-anyanisi obomvu, ama-tablespoons amathathu amafutha omnqumo, 2 amathisipuni we-curry, uviniga obhalsamu, usawoti.
Ukulungiselela. Geza bese uphapele, ubhake kuhhavini imizuzu engu-40, vula yonke imizuzu engu-10. Beka ku-movie yokudla noma esikhwameni se-cellophane bese uvumele ukuthi kupholile. Bese uthathe izingcezu ezincane. I-chicken fillet iyohlanzwa futhi yomiswe. Siyinquma ibe ama-cubes amancane, futhi usike u-anyanisi ube yizicucu.
Ukushayela. Sihlanganisa i-chicken fillet, amafutha omnqumo, i-curry, i-pepper, u-anyanisi. Futhi sibeka ama-marinade efrijini ebusuku. Ekuseni sizothatha i-fillet ngemifino efrijini, sizobe silingisa. On skewers sizobe ucindezela imifino kanye inyama, ukushintsha nabo.
Shashlik kusuka inkukhu gazinga phezu ukushisa medium imizuzu 5 noma 7, ukufafaza nabo ngezikhathi nge uviniga balsamic. I-shish kebabs kumele ihanjiswe.
Izithako: ama- clove amane e-garlic, ama-4 wezipuni zamafutha omnqumo, 1 isitshalo seqanda, 1 i-zucchini, i-tomato, u-1 u-anyanisi obomvu, ama-gramu angama-200 we-ushizi onothile, izingcezu ezingu-8 ze-mushroom, pepper, usawoti, uviniga wase-balsamic.
Ukulungiselela. Chofoza ugarlikhi. Masiqede izinyo ezi-1 ngegaliki, bese usixuba ngezipuni ezintathu zamafutha omnqumo. Utamatisi, i-zucchini, isitshalo seqanda, i-pancake nocucwe. Sizocubungula u-anyanisi bese usika ushizi sibe yizicucu. Fry in ama-pan noma grill amakhowe nemifino kuze kuphekwe. Thina pepper kanye nosawoti ukunambitha. Fry isinkwa, usihlize ngegalikhi, bese usipuni i-spoonful yamafutha omnqumo. Esikhathini sesinkwa sabeka amakhowe, imifino, amaqabunga ama-greenery, uma uthanda, ungathelela uviniga.
Ushizi nge-skewers ne-utamatisi
Izithako: ama-gramu angu-200 we-ushizi onothile, amagremu angu-200 we-gouda ushizi, utamatisi amancane angu-8, amagilebhisi.
Ukulungiselela. Ake usike ushizi sibe yizicucu ezinkulu. Masigeza utamatisi namagilebhisi. Sizohlwanyela ama-skewers amancane ama-berries omvini, utamatisi kanye noshizi. Futhi sibeka ama-skewers emabhokisini epulasitiki bese siwavala ngokuqinile ngama-lids.
Izithako: isinkwa esimhlophe, ama-125 amagremu ashizi, 2 utamatisi, ama-gramu angama-75, i-garlic, usawoti, amafutha omnqumo.
Ukulungiselela. Senza ukusika phezu kwesinkwa. Utamatisi, ham kanye noshizi sizokwehlisa izinkanyiso, sizobe sizinike futhi sizobeka, ukushintshanisa ezenzweni ezenziwe. Gaya u-garlic bese uhlangana nebhotela. Sibeka isinkwa esihlokweni bese sisebenzisa amafutha ngegalikhi. Sizovala isinkwa nge-foil bese siyibhaka kuhhavini.
Izithako: amaphakethe amabili ama-chips, (ngaphandle kwe-chips ne-bacon), amaphakheji amabili ama-crab sticks, i-1 ye-corn, 1 iphakethe lemayonnaise yomnqumo.
Ukulungiselela. Chop the chips, usike izinkuni crab. Sizofaka ama-chip chips, i-can of corn, izinkuni, yonke into izoxutshwa futhi igqoke imayonnaise yomnqumo. Ake silungise isaladi ngqo epikinikini.
Uma kusekhona igumbi elisele ebhasikidi, ngemva kokuba siphakamise yonke imikhiqizo, ngeke sikhohlwe ngezithelo nezitshalo ezintsha kanye namaqanda abilisiwe. Ngokuqondene neziphuzo zepikiniki, ibhodlela lewayini elihle nobhiya obandayo lizohambisana ne-shish kebab. Ukukhethwa kwewayini yepikinikini kuncike kokudla nokulutha kwezivakashi. Kulabo abangabumeli i-shish kebab ngaphandle kwewayini elibomvu, amawayini aseGeorgeya "Mukuzani", "Kindzmarauli", azohambisana newayini laseBurgundy elikhanyayo. Uma kukhona ukudla okulula, ibhodlela le-vodka elihle ngeke lilimaze, hhayi kuphela kulabo abahlala ngemuva kwesondo.
Sikutshele ukuthi ungadla ekhaya, futhi yikuphi okupheka ukudla okuyi-picnic kungalungiselelwa. Siphakamise izindlela zokupheka ezintsha, esithemba ukuthi uzowathanda, futhi uzothola ukuphumula okuhle emvelweni. Futhi mayelana neziphuzo ezinamandla, wazi ukuthi konke kudinga isilinganiso.
Isobho se-anyanisi oluhlaza
Ukupheka kokudla nsuku zonke
Umquba: imvubelo, ibhisikidi, isanti ...
Ukupheka okusheshayo nokumnandi
Ukulungiselela i-herring isaladi ngaphansi kwengubo yoboya
Yini ongayitshela ngayo ngendoda?
Ukubonakaliswa komhawu emadodeni
Izindlela zokwephulwa kwezifo ezinzima
Iklabishi isobho nenkukhu nobhontshisi
I-pasta ne-tomato sauce kanye ne-ricotta ebhakiwe
I-kaleidoscope ye-Autumnal: izintambo ezintathu zokugqoka ze-Pandora
Kungani ngingakwazi ukugcina i-monster ekhaya?
Izizathu ezingu-5 ezikuvimbela ukuba ungene ejimini lokuzivocavoca: debunking the main stereotypes!
Ingulube igwetshiwe ngoju uju
I-Nymphomania. Ngingu-nymphomaniac - kufanele ngenzeni?
Ukuziphatha kobudlelwane bebhizinisi phakathi kozakwethu
Indlela yokugcina umuntu-Isikrini
Imicabango yabantu abadumile ngothando
Ikhekhe nge ushizi kanye notamatisi